မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားမိပြီဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့အချက်များ – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားမိပြီဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့အချက်များ
Posted on March 21, 2018 August 24, 2018 by Noel
ဘယ်မိန်းကလေးမဆို ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားမိရင် အဲ့အမျိုးသားလေးက ကိုယ့်ကိုရောစိတ်ဝင်စားနေလားဆိုတာ သိချင်ကြပါတယ်။မိန်းကလေးဘက်ကစပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးခွင့်မရှိပေမဲ့ အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားလေးက ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားနေလား၊ သဘောကျနေလားဆိုတာကိုတော့ လေ့လာအကဲခတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါက မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလိုအလျောက်တတ်ကြတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပဲမဟုတ်လား။
ကဲ ဒါဆို ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားရင်ဘာတွေလုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဥပမာ သင်ဆံပင်ညှပ်လိုက်တာကို တခြားသူတွေထက်အရင်သတိထားမိတာမျိုး၊ အိတ်အသစ်ဝယ်လာတာ၊ဖိနပ်အသစ်စီးလာတာ၊ရေမွှေးပြောင်းဆွတ်လာတာက
အစသတိထားမိလာတာမျိုးပေါ့။ဆံပင်ညှပ်လိုက်တာကို တခြားသူတွေက သတိမထားမိပေမဲ့ သူကတော့သတိထားမိလာမယ်။ဆံပင်ညှပ်လိုက်တာ လိုက်တယ်၊လှတယ်
ဘာညာပြောလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါသူ့ဘက်က ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
ဒါကတော့ သိသာတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတစ်မျိုးပါပဲ။ယောက်ျားလေးတိုင်းလိုလို မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီဆိုရင် အလုပ်ကိုဖြစ်စေ၊အိမ်ကိုဖြစ်စေအကြောင်း အမျိုးမျိုးပြပြီး အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင် အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့စကားပြောခွင့်ရဖို့၊ အတူလျှောက်လည်ဖို့ပြောတာဖြစ်စေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ယောက်ျားလေးကမှ ကိုယ်သဘောမကျတဲ့၊ သူငယ်ချင်းလိုသဘောထားတဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့ အပြင်အတူသွားဖို့ကို တကူးတက လာခွင့်တောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်လို့များ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေထဲကမဟုတ်ပဲ အပြင်မှာတစ်ခါနှစ်ခါတွေ့ဖူးရာကနေ သင့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားသွားတဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင် သင်နဲ့နောက်တစ်ခါ
ဆုံတွေ့တဲ့အခါ သတိထားကြည့်ပါ။သူကသင့်အနောက်ကိုလိုက်ပြီး သင်နေတဲ့နေရာ၊သင့်ရဲ့ အလုပ်သွားရာလမ်းကြောင်းတွေမှာ သူ့ကိုအမြဲတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။ဒါက
သင်က ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီး အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကလည်း သင့်အနားမှာ ထိုင်ဖို့၊သင်နဲ့အတူ အပြင်သွားရဖို့၊သင်နဲ့အတူစကားလက်ဆုံပြောရဖို့ အမြဲကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့သင်ကံကောင်းပါတယ်။သူကလည်းသင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတွေ့ရင်လည်းသင်မီးစိမ်းတာနဲ့ လာပြီးစကားပြောတတ်တယ်ဆိုရင် ဒါက သင်လိုင်းပေါ်တက်လာတာကို အမြဲစောင့်နေတဲ့သဘောပါပဲ။
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီဆိုရင် သူမနဲ့ပတ်သက်တာ မှန်သမျှကို အသေအချာမှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။သင်က အမှတ်တမဲ့
ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတောင်မှတ်ထားလေ့ရှိပြီး သင်က အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမမှတ်မိရင်တောင်သူက သင့်အစားမှတ်မိပေးပါလိမ့်မယ်။သေချာသတိထားကြည့်ပါ။
ဥပမာ ချောကလက်ရေခဲမုန့်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်လို့ သင်အမှတ်တမဲ့ပြောထားဖူးရင် သင်နဲ့နောက်တစ်ခါအပြင်မှာတွေ့ရင် သင့်အတွက်ချောကလက်ရေခဲမုန့်မှာပေးပါလိမ့်မယ်။
၆။သူ့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုက သင်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်လိမ့်မယ်
အုပ်စုလိုက်စကားပြောကြတာဖြစ်စေ၊သူငယ်ချင်းနည်းနည်းနဲ့စကားပြောတာဖြစ်စေ သူဘာအကြောင်းကိုပဲပြောပြော သင့်ကိုပဲ ကြည့်ပြီးပြောလေ့ရှိမယ်။သင်
တစ်ယောက်တည်းပဲရှိတဲ့အတိုင်း သင့်ကိုပဲ ကြည့်ပြီးစကားတွေပြောပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေလုိ့၊သဘောကျနေလို့ပါ။
ဒါ့အပြင် အုပ်စုလိုက်သူငယ်ချင်းတွေရှိနေချိန်မှာတောင် သင့်ကိုပဲဂရုစိုက်နေမယ်ဆိုရင် ဒါကသေချာပေါက် သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါပဲ။
သင်ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက် အခက်အခဲဖြစ်နေလို့အကူအညီတောင်းလိုက်ရင် အမြဲတမ်းရောက်လာတတ်ပြီး သင်စိတ်ညစ်နေရင်လည်း ဘေးကနေ အားပေးမယ်၊အကြံဥာဏ်တွေပေးမယ်၊သင့်ကိုပျော်ရွှင်အောင်လည်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီယောက်ျားလေးက သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာမဟုတ်လို့ ဘာဖြစ်ဦးမှာလဲ?
ယောက်ျားလေးတိုင်းလိုလို မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီဆိုရင် အဓိကကတော့ အဲ့ဒီမိန်းကလေးကို ပိုပြီးဂရုစိုက်တတ်လာပြီး ကာကွယ်တတ်လာပါတယ်။သင်ချစ်တဲ့သူကရော သင်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဒီလိုအချက်လေးတွေလုပ်လေ့ရှိလား?
ဘယျမိနျးကလေးမဆို ယောကျြားလေးတဈယောကျကိုစိတျဝငျစားမိရငျ အဲ့ဒီအမြိုးသားလေးက ကိုယျ့ကိုရောစိတျဝငျစားနလေားဆိုတာ သိခငျြကွပါတယျ။မိနျးကလေေးဘကျကစပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးမေးခှငျ့မရှိပမေဲ့ အဲ့ဒီအမြိုးကောငျးသားလေးက ကိုယျ့အပျေါစိတျဝငျစားနလေား၊ သဘောကနြလေားဆိုတာကိုတော့ လလေ့ာအကဲခတျလို့ရပါတယျ။ ဒါက မိနျးကလေးတှရေဲ့ အလိုအလြောကျတတျကွတဲ့ပညာရပျတဈခုပဲမဟုတျလား။
ကဲ ဒါဆို ယောကျြားလေးတဈယောကျက မိနျးကလေးတဈယောကျကို စိတျဝငျစားရငျဘာတှလေုပျလရှေိ့တယျဆိုတာ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
ဥပမာ သငျဆံပငျညှပျလိုကျတာကို တခွားသူတှထေကျအရငျသတိထားမိတာမြိုး၊ အိတျအသဈဝယျလာတာ၊ဖိနပျအသဈစီးလာတာ၊ရမှေေးပွောငျးဆှတျလာတာက
အစသတိထားမိလာတာမြိုးပေါ့။ဆံပငျညှပျလိုကျတာကို တခွားသူတှကေ သတိမထားမိပမေဲ့ သူကတော့သတိထားမိလာမယျ။ဆံပငျညှပျလိုကျတာ လိုကျတယျ၊လှတယျ
ဘာညာပွောလာမယျဆိုရငျတော့ ဒါသူ့ဘကျက ကိုယျ့အပျေါစိတျဝငျစားခွငျးတဈမြိုးပါပဲ။
ဒါကတော့ သိသာတဲ့စိတျဝငျစားမှုတဈမြိုးပါပဲ။ယောကျြားလေးတိုငျးလိုလို မိနျးကလေး တဈယောကျကိုစိတျဝငျစားမိပွီဆိုရငျ အလုပျကိုဖွဈစေ၊အိမျကိုဖွဈစအေကွောငျး အမြိုးမြိုးပွပွီး အဲ့ဒီမိနျးကလေးကိုတှဖေို့ကွိုးစားပါလိမျ့မယျ။ပွီးရငျ အဲ့ဒီမိနျးကလေးနဲ့စကားပွောခှငျ့ရဖို့၊ အတူလြှောကျလညျဖို့ပွောတာဖွဈစလေုပျပါလိမျ့မယျ။ဘယျယောကျြားလေးကမှ ကိုယျသဘောမကတြဲ့၊ သူငယျခငျြးလိုသဘောထားတဲ့သူ တဈယောကျနဲ့ အပွငျအတူသှားဖို့ကို တကူးတက လာခှငျ့တောငျးမှာမဟုတျပါဘူး။
တကယျလို့မြား ကိုယျနဲ့ရငျးနှီးတဲ့သူတှထေဲကမဟုတျပဲ အပွငျမှာတဈခါနှဈခါတှဖေူ့းရာကနေ သငျ့အပျေါစိတျဝငျစားသှားတဲ့ယောကျြားလေးဆိုရငျ သငျနဲ့နောကျတဈခါ
ဆုံတှတေဲ့အခါ သတိထားကွညျ့ပါ။သူကသငျ့အနောကျကိုလိုကျပွီး သငျနတေဲ့နရော၊သငျ့ရဲ့ အလုပျသှားရာလမျးကွောငျးတှမှော သူ့ကိုအမွဲတှနေ့ရေပါလိမျ့မယျ။ဒါက
သငျက ယောကျြားလေးတဈယောကျကိုစိတျဝငျစားနပွေီး အဲ့ဒီယောကျြားလေးကလညျး သငျ့အနားမှာ ထိုငျဖို့၊သငျနဲ့အတူ အပွငျသှားရဖို့၊သငျနဲ့အတူစကားလကျဆုံပွောရဖို့ အမွဲကွိုးစားနတေယျဆိုရငျတော့သငျကံကောငျးပါတယျ။သူကလညျးသငျ့ကိုစိတျဝငျစားနတောပါ။ ဆိုရှယျမီဒီယာမှာတှရေ့ငျလညျးသငျမီးစိမျးတာနဲ့ လာပွီးစကားပွောတတျတယျဆိုရငျ ဒါက သငျလိုငျးပျေါတကျလာတာကို အမွဲစောငျ့နတေဲ့သဘောပါပဲ။
ယောကျြားလေးတဈယောကျက မိနျးကလေးတဈယောကျကိုစိတျဝငျစားမိပွီဆိုရငျ သူမနဲ့ပတျသကျတာ မှနျသမြှကို အသအေခြာမှတျထားလရှေိ့ပါတယျ။သငျက အမှတျတမဲ့
ပွောလိုကျတဲ့စကားကိုတောငျမှတျထားလရှေိ့ပွီး သငျက အဲ့ဒီအကွောငျးကိုမမှတျမိရငျတောငျသူက သငျ့အစားမှတျမိပေးပါလိမျ့မယျ။သခြောသတိထားကွညျ့ပါ။
ဥပမာ ခြောကလကျရခေဲမုနျ့ကို အရမျးကွိုကျတယျလို့ သငျအမှတျတမဲ့ပွောထားဖူးရငျ သငျနဲ့နောကျတဈခါအပွငျမှာတှရေ့ငျ သငျ့အတှကျခြောကလကျရခေဲမုနျ့မှာပေးပါလိမျ့မယျ။
၆။သူ့ရဲ့ အာရုံစိုကျမှုက သငျတဈယောကျတညျးဖွဈလိမျ့မယျ
အုပျစုလိုကျစကားပွောကွတာဖွဈစေ၊သူငယျခငျြးနညျးနညျးနဲ့စကားပွောတာဖွဈစေ သူဘာအကွောငျးကိုပဲပွောပွော သငျ့ကိုပဲ ကွညျ့ပွီးပွောလရှေိ့မယျ။သငျ
တဈယောကျတညျးပဲရှိတဲ့အတိုငျး သငျ့ကိုပဲ ကွညျ့ပွီးစကားတှပွေောပါလိမျ့မယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက သငျ့ကိုစိတျဝငျစားနလေို့၊သဘောကနြလေို့ပါ။
ဒါ့အပွငျ အုပျစုလိုကျသူငယျခငျြးတှရှေိနခြေိနျမှာတောငျ သငျ့ကိုပဲဂရုစိုကျနမေယျဆိုရငျ ဒါကသခြောပေါကျ သငျ့ကိုစိတျဝငျစားနတောပါပဲ။
သငျဘယျနရောကိုပဲရောကျရောကျ အခကျအခဲဖွဈနလေို့အကူအညီတောငျးလိုကျရငျ အမွဲတမျးရောကျလာတတျပွီး သငျစိတျညဈနရေငျလညျး ဘေးကနေ အားပေးမယျ၊အကွံဉာဏျတှပေေးမယျ၊သငျ့ကိုပြျောရှငျအောငျလညျးလုပျပေးမယျဆိုရငျ ဒီယောကျြားလေးက သငျ့ကိုစိတျဝငျစားနတောမဟုတျလို့ ဘာဖွဈဦးမှာလဲ?
ယောကျြားလေးတိုငျးလိုလို မိနျးကလေးတဈယောကျကိုစိတျဝငျစားမိပွီဆိုရငျ အဓိကကတော့ အဲ့ဒီမိနျးကလေးကို ပိုပွီးဂရုစိုကျတတျလာပွီး ကာကှယျတတျလာပါတယျ။သငျခဈြတဲ့သူကရော သငျနဲ့ပတျသကျရငျ ဒီလိုအခကျြလေးတှလေုပျလရှေိ့လား?
ပန်းချီကားတွေနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့အရာကို အချိန်ပေါင်းများစွာစောင့်ပြီးရိုက်ခဲ့ရတဲ့ ဓာတ်ပုံများ
ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်သော စိတ်ပူပန်မှုပြဿနာ